COPAC Inoita Musangano neMasangano Akazvimirira Oga
Komiti yeparamende iri kutungamira chirongwa chekunyorwa kwebumbiro idzva, yeCOPAC, yasangana neChipiri nevamiriri vemasangano akazvimirira vakakurukura nzira dzekushanda vose zvakanaka muchirongwa chekunzwa pfungwa dzevanhu pakunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaDouglas Mwonzora, vanoti musangano uyu wawirirana zvinhu zvakati wandeyi, izvo zvinosanganisira kuti paumbwe gwaro rinotara mashandiro anofanirwa kuitwa nevari kuongorora hurongwa uhu, pamwe nekuti vaongorori vose vave pasi pemubatanidzwa weNANGO pavanenge vachiita basa iri.
Pakambenge paita kusawirirana pakati peCOPAC nemasangano akazvimirira, zvichitevera mashoko ekuti COPAC yainge yati vanhu vaiongorora hurongwa uhu, vasungwe, sezvo vaiita zviri kunze kwemutemo.
Sachigaro weNANGO, Amai Dadirai Chikwengo, vanoti havana kuwirirana neCOPAC panyaya yekuti vanhu vavo vari kuongorora hurongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu, vanyorese nesangano iri.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika inoti matauriro ari kuita vanhu pamisangano yekunzwa pfungwa dzevanhu, anoita kunge vanhu ava vakaudzwa zvekutaura.
Mutungamiri wechirongwa chegutsaruzhinji nehutongo hwakanaka musangano re Institute for Democratic Alternative for Zimbabwe, VaJoy Mabenge, vanoti pane dambudziko hombe rinofanirwa kugadziriswa, kuitira kuti pfungwa dzevanhu dzinyatsobuda pachena.